COOKING Archives - SANTHITSA
တရုတ်ခေါက်ဆွဲကြော်နည်းမေးထားတဲ့ သူတွေအတွက်ကော အခြားသူတွေအတွက်ပါရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ တရုတ်ခေါက်ဆွဲကြော်နည်းကို နည်းအမျိုးမျိုးကြော်တဲ့ အထဲက အိစံရဲ့ ကြော်နည်းကတော့ မြန်မာပြည်က ဆိုင်တွေလို အရသာအီအီလေးနဲ့ စိုစိုလေးကြော်တဲ့နည်းပါ။ ခေါက်ဆွဲကြော်စိုစိုလေးဖြစ်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် ကြက်ပြုတ်ရည်လေး ကို သုံးရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ကြက်ပြုတ်ရည် အလွယ်တကူမရှိလျှင် ရေကိုသုံးရင်လဲရပါတယ်။ တရုတ်ခေါက်ဆွဲကြော်လေးကြော်စားကြည့်ရအောင်နော်။ ပါဝင်သောပစ္စည်းများ။ ၁။ ဂျုံခေါက်ဆွဲဖတ် – ၁ ပေါင် (သို့ ) ၂၅ ကျပ်သား။ ၂။ ၀က်သား (သို့ ) ကြက်သား – ၁ ပေါင် (သို့ ) ၂၅ ကျပ်သား။ ၃။ ပါးပါးလှီးထားသော ဂေါ်ဖီထုပ် – တရုတ်ထမင်းစားပန်းကန်လုံး ၃ …
ချစ်တို့ ရေ ကြေးအိုး ၊ ကြေးအိုး ဆီချက် လုပ်နည်း လေး ပြောပြမယ် နော် … ပါဝင် ပစ္စည်းများ ကတော့ လူ6ဦးစာ အတွက် 1. ကြာဆံ2ထုပ် ( 450 တန် ) 2. ဝက်သား အသား သီးသန့် – 50 ကျပ်သား 3. ဝက်သဲ – 10 ကျပ်သား 4. ဝက် နှလုံး –5ကျပ်သား 5. ဝက်အူ ချို – 15 ကျပ်သား …
ထမင်းပေါင်းအိုး နဲ့ ငါးသလောက် ပေါင်းနည်း ထ မင်း ပေါင်း အိုး နဲ့ ပေါင်း တာ ပါ …အ ရမ်း လွယ် ပါ တယ် ငါး သ လောက် ကို လို သ လို တုံး ။ ဆေး ကြော သန့် စင် ပြီး ရင် ဆား ဆ နွင်း ငံ ပြာ ရည် သ ကြား ထည့် ရှောက် သီး ကို အ ရည် ညှစ် ပြီး ထည့် နယ် …
လျှာဂျွန်းပြန်စေမယ့် အထောင်းစုံ 1. ဆတ်သား၊ ဆိတ်သား၊ အမဲသား၊ ဝက်သားခြောက်ချဉ်စပ်ထောင်း အရင်ဆုံး ဆတ်သားခြောက် မီးကင်ပြီး ဖွထားပါ။ ငရုတ်ဆုံထဲ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ထောင်းပါ။ မညက်တညက် အနေထားရောက်ရင် ဆတ်သား၊ ဆား၊ အရသာ၊ သံပုရာရည် ညှစ်ထည့်ပြီး အသားပွလာအောင် ထောင်းပါ။ အသားပွ အရသာမှန်ရင် နံနံပင်ညှပ်ထည့် ပဲဆီစိမ်းလေးဆမ်းပြီးအသာယာနယ်ပြီး ပွဲပြင်နိုင်ပါပြီရှင်။ ဆတ်သား၊ ဆိတ်သား၊ အမဲသား၊ ဝက်သားခြောက်ချဉ်စပ်ထောင် 2) ဂွေးသီးထောင်း လုံခြုံသီးထောင်းရအောင်ပါရှင်။ လုံခြုံသီး၁၀လုံး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းစိတ်ကြိုက်၊ ပုဇွန်ခြောက်အနည်းငယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၁ဥ၊ အရင်ဆုံး အသီးကိုရေဆေးပြီး အခွံခွာပါးပါး လှီးထားပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုမွှေးနေအောင်လှော်ထားပါ။ ပုဇွန်ခြောက်ကိုညက်အောင်ထောင်း ညက်လာရင် ကြက်သွန်ဖြူထည့်ထောင်း ညက်လာရင် …
သွားရည်ယိုစရာ ငါးပိချက် ငါးပိရည် ချက်နည်းပေါင်းစုံ ကျမချက်ခဲ့ဖူးသော ငါးပိချက်ငါးပိရည် စုစည်းမှုအပိုင်း(၁)ပါ။ ပုံလေးတွေအောက်မှာ ကျမရဲ့ချက်နည်းလေးတွေ ရေးပေးထားပါတယ်ရှင့်။ 1) ငါးပိရည်စိမ်းစိမ်းလေးဖျော်ကြစို့ ငါးငါးပိရည် ကြိုတော့မယ်ဆိုရင် ရေနွေးဆူအောင်တည်ပါ ဆူလာရင်နနွင်းမှုန့်ထည့်ပါ ကျမကတော့နနွင်းမှုန့်အနံ့ကြိုက်လို့ ပိုထည့်ထားပါတယ်။ ဝါဝါမွှေးမွှေးလေးပေါ့ ပြီးမှ ငါး ငါးပိထည့်ပြီး ၃မိနစ်မီးအေးအေးနဲ့ကြိုပါတယ် ပြီးမှငရုတ်သီးစိမ်းရယ် ကြက်သွန်ဖြူရယ်ကို ဆားထည့်လှော်ထားတာကို ထောင်းပြီး ငါး ငါးပိရည်ထဲထည့်ပါတယ် ငါးပိရည်အရသာ ပိုရဖို့ ငါးပြုတ်ပြီးသားတွေ ထပ်မထည့်ပါဘူးရှင် ကြိုက်ရင်တော့ ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။ 2) နံနံပင်ထောင်းလေးပါရှင် ပထမဆုံးငါးပိစိမ်းစားကင်ထားပါ ငရုတ်စိမ်းရယ် ကြက်သွန်ဖြူရယ် လှော်ပြီးထောင်းပါ ငါးပိစိမ်းစား ပုဇွန်ခြောက်ထည့်ထောင်းပါ အပေါ့အငန် စိတ်ကြိုက်ထည့်ပါ ပြီးမှနံနံပင်လှီးထားတာ ဖွဖွထည့်ထောင်းပြီးရင်တော့ အရမ်းမွှေးတဲ့ နံနံပင်ထောင်းစပ်စပ်လေး ရပါပြီရှင် …
ကိုရီးယား အစား အစာ သက်သတ်လွတ် ကင်မ်ချီ ။ ဝါတွင်း တွင် အ သား ဟင်း မစား တဲ့ သူ တွေ အတွက် အရမ်း ကောင်း တဲ့ ကင်မ်ချီလေး ဖြစ်ပါ တယ်။ သက် သတ် လွတ် ကင်မ်ချီ ကို လွယ် လင့် တကူ ပြုလုပ် နိုင် တဲ့ နည်း လမ်း လေးကို အောက် တွင် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါ တယ်။ ပါ ဝင် ပစ္စည်း တွေ ကတော့ မုန်ညင်း ဖြူထုပ်၊ ဆား၊ …